သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုမည်သို့စီစဉ်မည်နည်း Martech Zone
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရောက်နေပြီ ... သင်၏ဆိုဒ်သည်အသစ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေ၊ ဆိုက်ဟောင်းနွမ်းလာပြီဖြစ်စေ၊ သို့တည်းမဟုတ် visitors ည့်သည်များသင်လိုအပ်သည့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများကိုတိုးမြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏခြေလှမ်းလှမ်းကာသူတို့၏ကွန်ရက်တည်ရှိမှုတစ်ခုလုံးကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှကူးပြောင်းခြင်းသို့ပြောင်းလဲရန်လိုသည်။ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဓိကမဟာဗျူဟာ ၆ ခုခွဲထားတယ်။ အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘာရည်မှန်းချက်တွေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။
ပလက်ဖောင်း - မည်သည့်နည်းပညာများအသုံးပြုသည်၊
အဆင့်ဆင့် - သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲ။
အကြောင်းအရာ - မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သနည်း။
အသုံးပြုသူများသည် - မည်သူဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ - ဖောက်သည်များကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များ။
တိုင်းတာခြင်း - ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရှိသလဲ၊
အမှတ်တံဆိပ် - ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဖော်ပြသောအသွင်အပြင်၊ ခံစားမှု၊ အရောင်များ၊ ဖောင့်များ၊ ဒီဇိုင်း၊ စကားလုံးများစသဖြင့်။
လှုပ်ရှားမှုမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - စကားဝိုင်းပြောင်းရန်လမ်းကြောင်းများနှင့်လူများမည်သို့ရောက်ရှိမည်နည်း။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - လူတွေဘယ်နေရာမှာပြောင်းပြီးအဲဒီပြောင်းလဲမှုရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ။ CRM (သို့) Marketing Automation ပေါင်းစည်းမှုလိုအပ်ပါသလား။
အကြောင်းအရာ - ဘရိုရှာအချက်အလက်၊ ကုမ္ပဏီအသေးစိတ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ တင်ဆက်မှုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊
အီးမေးလ်လိပ်စာ - လူများသည်မည်သည့်နေရာတွင်စာရင်းသွင်းကြသနည်း၊ သင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်စပမ်းစည်းမျဉ်းများကိုမည်သို့စီမံသည်။
ရှာရန် - ပလက်ဖောင်း၊ သော့ချက်စာလုံးသုတေသန၊ စာမျက်နှာတည်ဆောက်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာအကြံပြုချက်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
လူမှုရေး - နေရာဒေသတစ်ခုလုံးတွင်အတိုအထွာများ၊ မျှဝေရန်ခလုတ်များ၊
မှတ်စု: ပိုမိုကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကိုအသုံးချပါ စိစစ်ရေးကိရိယာတစ်ခု ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဆိုက်တစ်ခုကို ၀ င်ရောက်ပြီး ၂-၃ ခေါက်အတွင်းဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အဆင့်ဆင့်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမြေပုံဆွဲရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်။
သင် site ကိုလက်ရှိသင်ဘာလုပ်ဖို့ဆိုဒ်ကဘာလုပ်သလဲ ဆက်လုပ်ပါ?
လက်ရှိဆိုဒ်ကမလုပ်နိုင်သည့်အရာ လုပ်ရတာဝမ်းသာပါတယ် site အသစ်ပေါ်တွင်လား။
သူတို့အားမဟာဗျူဟာတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုး အသုံးပြုသူပုံပြင်များ အသုံးပြုသူများအသီးအသီးအဘို့နှင့်သူတို့ site နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လို။ သူတို့ကိုလုပ်ရမယ်လုပ်ရမယ်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းသည်အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်လက်ခံမှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောကြွယ်ဝသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
အသုံးပြုသူသည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ဖြင့် ဝင်ရောက်၍ ဆိုက်အတွက်မှတ်ပုံတင်။ မသိပါကသူတို့၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသူအမည်၊ နာမည်အပြည့်အစုံ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ခိုင်မာသောစကားဝှက် (စာလုံးအကြီး၊ အကြီး၊ နံပါတ်များနှင့်သင်္ကေတများပေါင်းစပ်ခြင်း) လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေရန်အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုရမည်။ အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအထောက်အပံ့မပါပဲ၎င်းတို့၏စကားဝှက်ကိုပြုပြင်နိုင်သင့်သည်။
အခုဆိုရင်ငါတို့ site ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသူများက၎င်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအပြင် site အသစ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုချင်မှုများကိုသင်ရရှိပြီဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲမြန်သောတိုးတက်မှုသည်အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်ပုံပြင်များကို ဦး စား ပေး၍ သင့်တွင်ကောင်းမွန်သောအရာများမှတစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာများကိုမျှော်လင့်ရန်ပန်းတိုင်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစတင်စဉ်းစားပါ။
စာရင်း စာမျက်နှာများအတွက် site ကို။ ဤအရာကိုရိုးရှင်းအောင်ခြစ်ခြစ်လေ့ရှိသည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူမည်သည့်စာမျက်နှာအမျိုးအစားကိုဖော်ပြပါ template ကို စာမျက်နှာကိုစနစ်တကျဖော်ပြရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
တိုးတက် ကွမ်းခြံကုန်း စာမျက်နှာအပြင်အဆင်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်။
အကယ်၍ စာမျက်နှာအရေအတွက်ကိုလျှော့ချပါ (မကြာခဏထောက်ခံချက်ပေးသည်)၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်နည်း redirect အသုံးပြုသူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းမပြုရန်အတွက်ရှိပြီးသားစာမျက်နှာများ? လက်ရှိစာမျက်နှာများနှင့်နေရာအသစ်များအားလုံးကိုမြေပုံဆွဲပါ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုး ရွှေ့ပြောင်း ရှိပြီးသားစာမျက်နှာများကို CMS အသစ်မှတစ်ဆင့်စာမျက်နှာအသစ်များသို့ရယူရန်စီစဉ်ပါ။ ဤသည်အလွန်အခြေခံကျနိုင်ပါတယ် ... ကော်ပီကူးရန်နှင့်ငါးပိရန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအချက်အလက်များကိုတင်သွင်းရန်ရေးသားထားသောရှုပ်ထွေးသောဒေတာဘေ့စ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
တစ် matrix ကိုထုတ်တည်ဆောက်ပါ အသုံးပြုသူများသည်စာမျက်နှာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအရဌာနများ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ခွင့်ပြုချက်များ။ ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသို့ခွဲခြားခြင်းနှင့်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့။
လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီတွင်မည်သူ (တာ ၀ န်ယူရမည်)၊ မည်သည့်အရာ (အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်နေသည်)၊ မည်သို့ (ရွေးချယ်နိုင်)၊ မည်သည့်အချိန်တွင် (ခန့်မှန်းပြီးဆုံးသည့်နေ့)၊ , ရှိသည်ချင်တယ်။
အသုံးပြုသူများအားအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးအလုပ်နှင့်အချိန်ဇယားများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုရယူပါ။
အလယ်အလတ်အရင်းအမြစ်များ, ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်နှင့်ပြန်လည် ဦး စားပေးနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Be ။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် client ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်သင်၏ပြီးစီးသည့်ရက်များအကြားတွင်ကြားခံကြားခံများတည်ဆောက်ပါ။ အင်္ဂါရပ်အသစ်များ (နယ်ပယ်တွယ်မှု) ကိုမိတ်ဆက်ပါကအချိန်ကာလကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များကျခံရမည်ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုသဘောပေါက်ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားစင်မြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သရုပ်ပြပြီးလမ်းလျှောက်ပါ အသုံးပြုသူပုံပြင်များ လက်ခံမှုအတွက်။
စုပေါင်း analytics အဖြစ်အပျက်ခြေရာခံခြင်း, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းတာခြင်းများအတွက် site ကိုတစ်လျှောက်လုံး။
လက်ခံသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆိုဒ်ကိုတိုက်ရိုက်ထားပါ၊ အသွားအလာအဟောင်းကိုအသစ်သို့ပြောင်းပါ။ Webmasters နှင့် site ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရိုက်ကူးပါ analytics။ site ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်နေ့၌ Analytics တွင်မှတ်စုတစ်ခုထည့်ပါ။
သင်၏အစီအစဉ်ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ site ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်
Backup ကို လက်ရှိ site, ဒေတာဘေ့စနှင့်လိုအပ်သောမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။
က အရေးပေါ်အစီအစဉ် အမှုအရာမှားယွင်းတဲ့သွားသည့်အခါ (သူတို့လိမ့်မည်) ။
ဇယား အသုံးပြုသူများထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးသောဆိုက်အတွက် 'go live' ရက်စွဲ / အချိန်။
သော့ချက်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ အကြောင်းကြား ဖောက်သည်များအပါအ ၀ င်ဆိုဒ်မရရှိနိုင်သည့်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရှိလျှင်။
တစ်ခုရှိသည် ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ် လူတိုင်းကိုဖုန်းသို့မဟုတ်စကားပြောနိုင်စေရန်သေချာစေရန်နေရာရှိသည်။
site အသစ်ကိုထည့်ပါ အသက်ရှင်သော.
စမ်းသပ် အသုံးပြုသူပုံပြင်များ နောက်တဖန်.
ဆိုက်ကိုဖွင့်ခြင်းသည်အဆုံးမဟုတ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်ရာထူး၊ analytics site ကိုသင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်သေချာစေရန်။ တိုးတက်မှုနှင့်အတူ2မှ6ပတ်ကြာ 8 ပတ်တိုင်းသတင်းပို့ပါ။ စီမံကိန်းများနှင့်အညီစီမံကိန်းများ update လုပ်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
Tags: backup လုပ်ထားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ရွှေ့ပြောင်းအသစ်စီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုက်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်းsite ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအသုံးပြုသူပုံပြင်များweb design မှာဝဘ်ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်wireframe
မတ်လ 12, 2014 မှာ 7: 21 AM
ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကိုစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြိုကွဲမှု! ဤကဏ္ areas တစ်ခုစီသည်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်သေချာသည်။
ဒါကစီးရီးအဘို့ကြီးသောပါလိမ့်မယ် ... .seriously!
မတ်လ 12, 2014 မှာ 2: 48 pm တွင်
လုပ်လိုက်ကြရအောင်! ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ခု infographic နှင့် whitepaper ပူးတွဲရေးသား?